Uncategorized – Page 73 – Shabakadda Amiirnuur
Sawirro+ Cod: Mareykanka oo Qof Shacab Ah Ku Dilay Duqeyn Diyaaradeed oo Uu Ka Fuliyay Sh/Hoose.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen degaanka tirsan Shabeelaha Hoose shalay abbaaro 05:00 (Shantii galabnimo) Duqeyntan oo ka dhacday meel u dhow degaanka Kuunyo-Barrow ayaa waxay diyaaraduhu ku beegsadeen Aboow Cali Waardiyoow oo ahaa nin ganacsade ah oo leh xoolo iyo beero, sidoo kalana […]
Dowladda Ingiriiska waa gumeystaha ugu xun, gumeystayaashii dalka Soomaaliya kusoo duulay ama qabsaday waayo waa gumeystaha kaliya ee markuu naga tagayay dhulkeena u qeybiyay dowlado Kiristan ah sida:- Itoobiya iyo Kenya. Itoobiya wuxuu inaga siiyay Hawd iyo Galbeed. Kenyana wuxuu inaga siiyay NFD, waxaana qorshahan majaraha u hayay madaxdii Ingiriiska […]
Kulan dhawaan ka dhacay mid kamid ah xeryaha ciidamada shisheeye ee Shabeelaha Hoose islamarkaana dhex maray saraakiil ajaanib ah oo Afrikaan iyo caddaan isugu jira iyo kuwa Soomaali ah ayaa waxaa looga hadlay culeys ciidan la’aaneed oo ka jira degaanada ay heystaan ee gobolka. Ciidamada shisheeye ee heysta Bariire, Marko […]
Dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo labaduba ka mideysan in qariidada adduunka laga waayo qaran jira oo Soomaaliya la yiraahdo ayaa tartan xooggan ugu jira suuq geynta qaadka iyo maandooriyaasha kale oo ay khamradu ugu horreyso. Suuqan oo marxalado badan soo maray ayaa waxaa haatan dhaqaalaha ugu badan ka hela dowladda […]
Wararka ka imaanaya deegaanka Weydoow ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooga lala eegtay maleeshiyaat ka tirsan DFS oo ka yimid dhanka Sh/hoose kuna sii jeeday Muqdisho. Qaraxan ayaa lala helay gaari nooca dagaalka ah ee ay Soomaalidu u taqaano “Cabdi Bile” waxaana la sheegay in uu gabi […]
Ciidanka Mareykanka Ee Bankaraf oo Dad Beerahooda Falanayay Ka Afduubtay Sh/hoose.
Ciidanka Bankarafta loo yaqaano ee uu Mareykanku qortay ayaa xalay ku duulay tuulo hoos tagta Jannaale oo lagu magacaabo Busley halkaasoo ay ka afduubteen dad beerahooda qodanayay. Beeraleyda ay kaxaysteen oo ay tiradoodu gaareyso 7 ayaa waxay la aadeen dhanka Nambar 50, oo ay markii hore kasoo duullaan tageen. Ujeedada […]
Ciidamada Al-Shabaab Oo Cagta mariyay saldhig Ciidan oo ku yaala Gaarisa.
Dagaalyahanno aad u hubeysan oo katirsan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duulaan ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaan u dhow magaalada Gaarisa ee dhulka NFD. Saldhiga ay ciidamada Mujaahidiinta weerareen waxaa uu ku yaalaa deegaanka Yuumbis oo u dhow magaalada Gaarisa, waxaana gebi ahaanba saldhiga lagala wareegay […]
Iran oo soo ridday diyaarad Drone ah Iyo Mareykanka oo Xaqiijiyay Inuu Isagu Lahaa.
Afhayeen u hadlay taliska ciidanka kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ay dhulka soo dhigeen diyaarad nuuca wax basaasta ah oo uu leeyahay Mareykanka. Diyaaradda ayaa lasoo riday xilli ay falal basaasnimo ka wadday koonfurta wadanka Iiraan sida ay faafisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda shiicada Iiraan. Warbixinta kasoo baxday […]
Muslimiinta Uyghurka ah ee Turkistanta Bari waxay wajahayaan ollole isir sifeyn ah oo aad u qalafsan. Waxaan wax ka taaban doonaa taariikhda Turkistanta Bari, marxaladaha uu soo maray gumeysiga shiinahu iyo sida ay uga falceliyeen Muslimiinta iyo caalamka kale. Qoomiyadaha dega Turkistanta bari waxay leeyihiin xadaarad 4,000 oo sanno ah. […]